किन लुकाइन र किन लुकिन प्रियंका ? – Namaste Filmy
किन लुकाइन र किन लुकिन प्रियंका ?
नायिका प्रियंका कार्कीको विभिन्न साना साना गतिविधिले समेत ठुलै चर्चा पाउने गर्छ । ब्यक्तिगत बिषय नै भए पनि उनी मिडियामा छाइरहन्छिन । तर पछिल्लो पटक भने उनको फ्यान तथा नेपाली फिल्मका दर्शकहरु सबै जिल्ल खाए ।
फिल्म ‘क्लासिक’ हेर्न हलमा पुगेका दर्शक त्यतिबेला छक्क परे जब पर्दामा प्रियंकाकौ इन्ट्रि भयो । दर्शकहरु कसैले प्रियंका पनि क्लासिक हिरोइन हुन भन्ने सोचेकै थिएनन् । यतिसम्मकि क्लासिकमा प्रियंका पनि छिन भन्ने कुरा मिडिया, पत्रकार र अन्य फिल्मकर्मीलाई पनि थाहा थिएन ।
निर्माण टीमले प्रियंकालाई यसरी गोप्य राखे कि छयांकन देखि प्रदर्शनसम्म पनि उनको बारेमा कसैले बोलेनन् । उनलाई फिल्मको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाट समेत टाढै राखे । उनको बारेमा मिडियालाई सुइकोसमेत दिइएन । स्वयम प्रियंकाले पनि न त क्लासिकको बारेमा केहि बोले न त क्लासिक पब्लिसिटीमा सक्रियता देखाए ।
यो फिल्म निर्माण टीमको योजना नै रहेछ । फिल्ममा हिरोइन नम्रता श्रेष्ठ सरहकै भुमिका निभाएकी प्रियंकालाई सस्पेन्समा राखेर दर्शकलाई सरप्राइज दिने काम निर्माण टीमले गरेका छन । जसलाई दर्शकले स्वीकारेका पनि छन । कतिपय दर्शक प्रियंकाको लुकाइएको क्यारेक्टर हेर्नकै लागि हलमा पुगेका छन ।
शुक्रबारबाट रिलिज फिल्मले उत्कृष्ट ब्यापार गरिरहेको छ । आर्यन सिग्देल फिल्मको मुख्य पात्र हुन भने नम्रता श्रेष्ठ र प्रियंका कार्की पनि मुख्य भुमिकामा छन । फिल्मलाई सुवास गिरिको प्रस्तुतिमा दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन ।
'चपली हाईट'को सिक्वेल निर्माण हुने
अनमोल केसीको 'ड्रिम्स'को नयाँ गीत रिलिज । भिडियो